API602 zakha Steel Valve
Imichiza kunye nePetrochemical
Cryogenics kunye ne-LNG
Amashishini ePulp kunye nePhepha
Ukugcinwa kunye nokufakwa endaweni yokupakisha kwevalve ye-API 600 yeSango
Indlela yokugcina nokupakisha vana:
Iifiller zale projekthi ikakhulu ziqulathe ezi zinto zimbini zilandelayo: i-PTFE kunye negraphite ethambileyo.
Xa igcinwe, itywinwe engxoweni okanye ebhokisini. Gcina ngokucocekileyo kwindawo yokugcina izinto eyomileyo kunye nomoya, kuphephe ukukhanya kwelanga. Nika ingqalelo ekungeneni komoya ngexesha lokugcina ixesha elide, kwaye ulawule ubushushu bendawo yokugcina ukuba ingagqithi kuma-50 ° C ukuthintela uthuli olugqithisileyo. Ukuba uthuli oluqhotyoshelwe kumphezulu wokugcwalisa luyasuswa lusetyenziswe, lusule ngelaphu elicocekileyo.
Valve ukupakisha indlela replacement:
Amatywina okupakisha abhalwe ngolu hlobo lulandelayo: 1). Ukupakisha uxinizelelo nut, 2) Swing bolt, 3) pin Fixed, 4) Ukupakisha, 5) Ukupakisha umkhono, 6) Ukupakisha koxinzelelo ipleyiti (ngamanye amaxesha i-5 kunye ne-6 ziyinxalenye ehambelana nokubumba kunye nokuchongwa ziimeko zokusebenza ezahlukeneyo, umsebenzi uphela iyafana naleyo yokwahlulahlula)
Amanyathelo okupakisha etywina endaweni yokuma kwezi zilandelayo:
1. Sebenzisa utsalo ukususa 1) ukupakisha ucinezelo nut ukunyusa 5) sleeve ukupakisha cinezela kunye 6) ukupakisha cofa ipleyiti, eshiya isithuba ukusebenza ukuze endaweni ukupakisha.
2. Sebenzisa i-blade-blade screwdriver okanye ezinye iziqwenga zentsimbi ukususa ukupakisha kwasekuqaleni kwaye ubeke endaweni entsha. Ukuba ukupakisha kuyasetyenziswa, xa ufaka ukupakisha okutsha, naka ingqalelo kwicala lokucuthwa kokupakisha kufuneka kugxadazelwe nge-90 ~ 180 °, kwaye i-engile ebandakanyiweyo kufuneka iphindaphindwe ngababini. Musa ukugqobhoza kaninzi kwicala elinye njengoko kubonisiwe kumzobo;
3. Emva kokufaka inani elifanelekileyo lokupakisha, buyisela i-5) ukupakisha i-gland kunye ne-6) ukupakisha ufakelo lweplate yoxinzelelo. Xa ufaka, nikela ingqalelo kwindawo yesitywina sokupakisha kunye ne-6 ~ 10mm nzulu kwisembozo sevalve (okanye i-1.5 ~ amaxesha ama-2 ubukhulu bokupakisha) njengesalathiso sokubekwa (njengoko kubonisiwe ngezantsi).
4. Buyisela 1). Ukupakisha uxinizelelo nut, 2) Qinisa indawo yokufaka ye-bolt edibeneyo ide ifike kwi-20% yokucinezelwa kokupakisha.
5. Emva kokugqiba la manyathelo angentla, yenza uhlolo oluphambili kwivelufa ebuyisele ukupakisha kusetyenziso olulandelayo ukubona ukuba kunyanzelekile na ukonyusa ukulayishwa kwangaphambili kokupakisha.
Ngokuphawula: Imiyalelo yokuqinisa kwakhona kunye nokutshintsha ukupakisha phantsi koxinzelelo.
Le misebenzi ilandelayo yingozi. Nceda ungazami kancinci ukuba akuyomfuneko. Nceda ulandele ngokungqongqo olu xwebhu isikhokelo ngexesha lomsebenzi:
1. Umqhubi kufuneka abe nokuqonda okuthile koomatshini nezivalo. Ukongeza kwizixhobo eziyimfuneko zoomatshini, umqhubi kufuneka anxibe iigloves ezifudumeza ubushushu, amakhaka obuso kunye neminqwazi.
2. Ivalve ivulwe ngokupheleleyo de itywina elingaphezulu levalve lisebenze ngokupheleleyo. Isiseko sokugweba kukuba indlela yokusebenza yevalve ayisakwazi ukuphakamisa isiqu sevalve, kwaye akukho sandi singaqhelekanga kwisitshixo sevalve.
3. Umqhubi kufuneka abe kwicala lokupakisha uphawu lwendawo okanye ezinye izikhundla ezingenakuqikelelwa. Akuvunyelwe ngokungqongqo ukujongana nendawo yokupakisha. Xa ukupakisha kufuneka kuqinisiwe, sebenzisa utsalo ukuqinisa 1) Ukupakisha uxinizelelo nut, 2 ~ 4 amazinyo, omabini amacala okupakisha uxinzelelo nut Ifuna ukwenziwa, hayi icala elinye nje.
4. Xa ukupakisha kufuneka kutshintshwe, sebenzisa isikrufu ukukhulula i-1) Ukupakisha uxinizelelo wenut, 2 ~ 4 amazinyo, ukupakisha uxinezeleko kumacala omabini kufuneka kwenziwe ngokunye. Ngeli xesha, ukuba kukho impendulo engaqhelekanga evela kwisiqu sevalve, kwangoko yeka kwaye usete kwakhona i-nut, qhubeka usebenze ngendlela yokusebenza kwevalve ngokungqinelana nenkqubo kwinyathelo 2, gcwalisa itywina kwisiqu sevalve de isebenze ngokupheleleyo, kwaye uqhubeke endaweni yokupakisha. Ukupakisha endaweni yoxinzelelo akuvumelekanga ukuba kutshintshwe ngokupheleleyo ngaphandle kweemeko ezizodwa. Ubungakanani obubuyiselweyo yi-1/3 yokupakisha iyonke. Ukuba akunakwenzeka ukugweba, iipakethe ezintathu eziphezulu zingatshintshwa. Emva kokuba ufakelo lugqityiwe, buyisela ukufakelwa kwemikhono emi-5 yokupakisha kunye neepleyiti zokushicilela ezi-6. Xa ufaka, nikela ingqalelo kwindawo yesitywina sokupakisha kunye ne-6 ~ 10mm nzulu kwisembozo sevalve (okanye i-1.5 ~ amaxesha ama-2 ubukhulu bokupakisha) njengesalathiso sokubekwa. Buyisela i-1). Ukupakisha ucinezelo nut, 2) Qinisa indawo yokufaka ye-bolt edibeneyo ukuya kwi-25% yoxinzelelo oluphezulu lokupakisha. Ukuba akukho kuvuza kwindawo yokupakisha ye-valve esezantsi, kugqityiwe. Ukuba kukho ukuvuza, landela iinkqubo kumanyathelo 2 no-3 ukuqinisa.
5. Onke la manyathelo okusebenza angentla enzelwe ukunyuka kwezivalo zokumisa isiqu ezinje: ngokunyuka kwesivalo sokuma kwesitampu, ukunyuka kwesitopu sokumisa, njl. Njl. Isiqu stop valve, ibhabhathane vana, ivelufa Ball njalo njalo.
Ixesha Post: Jun-30-2021
UWenzhou watts Valve Co., Ltd.
Ukugcinwa kunye nokutshintshwa kwe-API 600 G ...
Indlela yokukhetha izinto zevalvethi eziphantsi ...
Umgaqo osebenzayo wevalve yebhola yombane
Newsway Valve Ubushushu eliphezulu ibhola vana
Imakethi yevalvethi yemizi-mveliso ikwimeko entle ...
Idilesi: Ummandla wezoShishino weDongOu, iOubei Yongjia Wenzhou City, iZhejiang China-325105
WENZHOU NEWSWAY VALVE CO., LTD © Copyright - 2010-2022: Onke amalungelo agciniwe. Imveliso eshushu - Imephu yendawo